रोनाल्डो बिनाको पोर्चुगलमा आन्द्रे सिल्भा सानदार बन्दै !! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
रोनाल्डो बिनाको पोर्चुगलमा आन्द्रे सिल्भा सानदार बन्दै !!
युइएफए नेसन्स लिग फुटबलअन्तर्गत भएको खेलमा सन् २०१६ को युरो च्याम्पियन पोर्चुगलले पोल्यान्डलाई हराएको छ । गत राति पोल्यान्डको घर चर्जोमा भएको खेलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोबिनाको पोर्चुगलले पोल्यान्डलाई उसकै घरमा ३–२ ले पराजित गरेको हो ।
पोर्चुगलको जितमा २ गोल आफैंले गरेको थियो भने १ गोल उपहार पाएको थियो । १८औं मिनेटमा क्रिस्टप पियाटेकले घरेलु टोली पोल्यान्डका लागि सुरुआती गोल गरेका थिए । तर, ३१औं मिनेटमा युवा फरवार्ड आन्द्रे सिल्भाले गोल गर्दै पोर्चुगललाई खेलमा फर्काए ।
खेलको ४३औं मिनेटमा पोल्यान्डका कामिल जिलिकले आत्मघाती गोल गर्दा पोर्चुगलले पहिलो हाफमा घरेलु टोलीविरुद्ध २–१ ले अघि रह्यो ।
दोस्रो हाफको ५२औं मिनेटमा पोर्चुगलका लागि युवा फरवार्ड बर्नान्डो सिल्भाले गोल गरेर पोर्चुगललाई थप अग्रता दिलाए । तर, ७७औं मिनेटमा जाकुव ब्लाजसेज्नीवस्कीले पोल्यान्डका लागि गोल गरे पनि त्यो टोलीको हार टार्न पर्याप्त भएन । र, पोर्चुगलले ३–२ ले जित्यो ।
नेसन्स लिगमा पोर्चुगल हालसम्म अपराजित रहेको छ । ऊ समूह ‘ए’ रहेको शीर्ष स्थानमा छ ।
विश्वकप २०२२बाटै ३२ राष्ट्रबाट विस्तार गरेर ४८ राष्ट्र गरिने योजना : फिफा
लेस्टर सिटीका मालिकको हेलिकप्टर स्टेडियम बाहिर दुर्घटना !!
नया खेलाडीको साथ यसरी उत्रिदै छ ब्राजिल !! को को टिममा परे र कोसंग कहिले भिड्दै छ ब्राजिल यो साता !!
फेरी अर्को बलात्कारको आरोपमा मुछिए रोनाल्डो!! के होला हुनको अबको खेल जीवन??
अमेरिकाकी युवती माथि बलात्कारको आरोपमा -“क्रिस्टियानो रोनाल्डो”!! यस्तो छ पूर्ण रिपोट !!